Magaca Mid Ka Mid ah Maleeshiyaadkii Weeraray Jamaacada Garissa oo La Shaacisay – Radio Muqdisho
Magaca Mid Ka Mid ah Maleeshiyaadkii Weeraray Jamaacada Garissa oo La Shaacisay
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa shaacisay magaca mid ka mid afartii qof ee weerartay jaamacadda magaalada Garissa oo ay ku geeriyoodeen 148-qof oo u badnaa aradadii wax ka baraneysay jaamacadda.
Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa magaca ninkaasi ku sheegtay Abdirahim Mohamed Abdullahi oo haysta dhalashada Kenya,aabihiisna uu horey u ahaa Gudoomiyihii hore ee deegaanka Buulo Jamhuri oo ka tirsan degmada Mandhera.
Aabaha dhalay wiilkan ayaa horey ugu war galiyay ha’adaha ammaanka ee dalka Kenya in wiilkiisa uu waayay,uuna u maleynayo in uu ku biiray kooxda Al-shabaab.
Aabaha dhalay wiilkan ayaa sheegay in markii u danbeysay oo uu la hadlay wiilkiisa ay aheyd sanadkii hore,mana u sheegin meesha uu joogo.
Abdirahim Mohammed Abdullahi ayaa ka qalin jebiyay Dugsiga sare ee WAMY ee magaalada Nairobi sanadkii 2007.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya Mwenda Njoka ayaa sheegay in Abdirahim Abdullahi uu sanadkii 2013 ka qalin jabiyay qeybta sharciga ee jaamacadda Nairobi,isagoo ahaa qareen soo baxayay.
Aabaha dhalay Abdirahim Mohammed Abdullahi ayaa maanta soo gaaray magaalada Nairobi,isagoo diiday in uu warbaahinta la hadlo.
Taliyaha booliska ee degmada Mandera Alex Nkoyo ayaa sheegay in aabaha dhalay dhagar qabahan uu ku soo war galiyay in uu jaray xiriirkii uu la lahaa wiilkiisa,ka db markii uu uga shakiyay in uu ku biiray kooxda argagixisada ah ee UGUS.
Dhagar qabahan ayaa la aqoonsaday ka dib markii ciidamada milatariga ay magaalada Garissa ku soo bandhigeen meydadka afartii qof ee weerartay jaamacadadii magaaladasi.
Real Madrid oo Xasuuqday Granada iyo Ronaldo oo Shan Gool Dhaliyay “Sawirro”
Madaxweynaha oo culumada ku boorriyay in ay faafiyaan fahamka saliimka ah ee Islaamka si shacabka loo badbaadiyo (Sawirro)